दशैंमा स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् एयरपोर्टमा भन्सार लाग्ने र नलाग्ने सामान » Khulla Sanchar
दशैंमा स्वदेश फर्किंदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् एयरपोर्टमा भन्सार लाग्ने र नलाग्ने सामान
काठमाडौं । दशैं-तिहार मनाउन विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? घर फर्किँदा के-के समान लैजान पाइने/नपाइने हो भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ होला । सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किनेहरुका लागि विभिन्न वस्तुमा भन्सार नलाग्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुले १०० ग्रामको ढिक्का सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थाबारेको खबरले धेरैलाई अलमलमा पारेको छ । तर, त्यो बैंकका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनैपनि व्यक्तिले काँचो सुन विदेशबाट ल्याउनै पाउँदैन । तयारी गहना भने ५० ग्रामसम्म ल्याउन अनुमति हुन्छ । यसमा कुनै भन्सार पनि लाग्दैन । अनलाइनखबर